Sida god madow u samaysmo: asal iyo sifooyin | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | 21/07/2021 09:17 | Astronomy
Mid ka mid ah canaasiirta aadka looga baqo adduunka waa godka madow. Waxaa lagu qiyaasaa in bartamaha galaxyadeenu ay sameysay god weyn oo madow. Waxay ku saabsan tahay hal dhibic, culeyska ficil ahaan waa mid aan la koobi karin wuxuuna isku dayayaa inuu "liqo" wax kasta oo jidkiisa ku jira. Sayniska ayaa bartay sida god madow u samaysmo maxayse yihiin fursadaha ay ku sii weynaanayaan.
Sidaa darteed, waxaan qormadan u hibeynaynaa si aan kuugu sheegno sida god madow u sameysto iyo astaamaha uu yahay.
2 Sidee god madow u samaysmaa
3 Xoog god madow
4 Evolution of god madow
Godadkan madoow ma aha wax ka badan haraaga xiddigo qadiimi ah oo aan sii jirin. Xiddigaha waxay u muuqdaan inay leeyihiin waxyaabo badan iyo qurubyo, sidaas darteed waxay leeyihiin culeys badan. Waxaad u baahan tahay oo keliya inaad aragto sida qorraxdu u leedahay 8 meere iyo xiddigo kale oo isdaba joog ah. Nidaamka qoraxda wuxuu ujiraa culeyska qorraxda. Dhulku wuu soo jiitay, laakiin taasi macnaheedu maaha inaan kusii dhowaanayno qorraxda.
Xiddigo badan ayaa noloshooda ku dhammeeya qaab cadaanyo cufan ah ama xiddigo naadir ah. Godadka madow waa marxaladda ugu dambeysa ee isbeddelka xiddigahaas oo aad uga ballaaran qorraxda. In kasta oo dadku u haystaan ​​in qorraxdu weyn tahay, haddana waa xiddig dhexdhexaad ah (xitaa way yar tahay marka loo barbar dhigo xiddigaha kale). Taasi waa sababta waxaa jira xiddigo 10 iyo 15 jeer ka weyn cabbirka qorraxda, oo markay jiritaankooda ka baxaan, waxay samaynayaan god madow.
Haddii aysan jirin xoog joojin kara ficilka culeyska, waxaa soo muuqan doona god madow, kaas oo yareyn kara dhammaan meelaha bannaan isla markaana ku cadaadin kara illaa inta mugdiisu eber noqonayso. Waqtigan xaadirka ah, cufnaanta ayaa la oran karaa waa mid aan xad lahayn. Si kale haddii loo dhigo, xaddiga arrinta ku jiri karta mugga eber waa mid aan xad lahayn. Sidaa darteed, culeyska culeyska culeyska bartaas madow sidoo kale waa mid aan xad lahayn. Waxba kama baxsan karaan soo jiidashadaan.
Xaaladdan oo kale, xitaa iftiinka uu xiddiggu haysto kama baxsan karo cuf isjiidadka oo wuxuu ku xanniban yahay meertadiisa. Sababtaas awgeed, waxaa loogu yeeraa dalool madow, maxaa yeelay muggan cufnaanta iyo culeyska aan dhammaadka lahayn, xitaa iftiinka ma soo saari karo iftiinka. In kasta oo culeysku aan la koobi karayn oo keliya barta caddadka eber ee meesha bannaan ku laaban tahay, godadkan madow waxay isku soo jiidan karaan maadada iyo tamarta midba midka kale.
Godadka madow waxay ka kooban yihiin kaliya xiddigo aad u waaweyn. Markay ka dhamaadaan shidaalka dhamaadka noloshooda, waxay ku burburaan dariiq masiibo ah oo aan la joojin karin, markay burburaana waxay samaystaan ​​ceel ku dhex yaal booska - god madow. Haddii aysan sidaa u weyneyn, waxyaabaha iyaga ka dhigayaa waxay ka horjoogsan karaan inay dumiyaan oo ay sameystaan ​​xiddig dhimanaya oo si dirqi ah u soo saaraya iftiinka: cows cadaan ah ama xiddig naadir ah.
Farqiga u dhexeeya godadka madow waa cabirkooda. Xiddiguhu waa kuwa leh cuf ballaaran oo u dhigma kan qorraxda iyo gacan wareeg ah oo tobanaan ah ama boqolaal kilomitir. Kuwa leh culeysyo gaaraya malaayiin ama xitaa balaayiin jeer cufnaanta qorraxda waa godad madow oo aad u weyn oo ku yaal xuddunta galaxies.
Waxa kale oo jiri kara godad madow oo dhexdhexaad ah, boqolaal kun oo cufnaan cadceedda ah, iyo godad madow oo hore oo samaysmay bilowgii koonkan, dadkooduna aad buu u yaraan karaa. Jiiditaankooda cuf isjiid jiidku aad buu u weyn yahay oo kama baxsan karaan soo jiidashadiisa. Haddii iftiinka ugu dhaqsaha badan koonkeenna aan la demin karin, markaa waxba lama demin karo.
Xoog god madow
In kasta oo marwalba loo maleyn jiray in god madow uu soo jiidan doono wax kasta oo hareeraheeda ah isla markaana uu hafi doono, haddana sidaas maahan. Meeraha, iftiinka iyo walxaha kale ee ay liqaan godka madow, waa inaad aad ugu dhowaataa isaga si aad u soo jiito xaruntiisa waxqabadka. Mar alla markii aad gaartid meesha aan laga laaban karin, waxaad gelaysaa munaasabadda dhacdada, ee aadan ka baxsan karin.
Markayna gasho dhacdooyinka dhacdooyinka, waan dhaqaaqi karnaa, waa inaan awoodnaa inaan uga dhaqaaqno si ka fudud iftiinka. Cabirka godka madow aad buu u yar yahay. God madow, sida kuwa laga helo xarumaha galaxiesyada qaarkood, waxay leedahay gacan gacanteedu dhan tahay ilaa 3 milyan oo kilomitir. Waxaa jira wax badan ama ka yar oo ku saabsan 4 qorrax sida kuweenna. Haddii daloolka madow uu leeyahay tiro la mid ah qorraxdayada, markaa dhexroorkeedu waa 3 kilomitir oo keliya. Sida had iyo jeer, meelahaasi waxay noqon karaan cabsi, laakiin wax kasta oo koonkan ka jira ayaa ah.
Waa in la xoojiyaa in daloolka madow uu ku dhegi karo dhammaan arrimaha iyo waqtiga-yar laftiisa dhexdiisa. Kaliya maahan inay iftiin qabato, laakiin waa xarun leh xarun culeys caynkan oo kale ah oo xoojin karta wax kasta oo aan dhahno. Godka laftiisu waa gebi ahaanba madow oo aan lahayn astaamo. Illaa iyo hadda, ma aysan awoodin inay ku noqdaan guryahooda sababo la xiriira saameynta weyn ee ay ku yeesheen deegaankooda. Waxay sidoo kale caan ku yihiin tamarta weyn ee ay sii daayaan.
Taasi waa sababta soo-gaadhista ugu horreysa ee daloolka madow ay ugu wacan tahay adeegsiga shabakad muraayado ah. Raajo-baarisyadan ayaa qiyaasi kara shucaaca hawada sare ka yimaada. Nama tilmaamayso koonkan sida telescope-ka. Si gaar ah loo ogaado laba dalool madow, aaladda loo yaqaan 'fluoroscope' ayaa la isticmaalay. Mid ka mid ahi waa godka madaw ee weyn ee ku yaal bartamaha galaxyadayada.
Evolution of god madow
Sababtoo ah way yar yihiin oo madow yihiin, si toos ah uma daawan karno. Tan awgeed, saynisyahannadu waxay muddo dheer ku tuhmeen jiritaankeeda. Wax la ogyahay inuu jiro laakiin aan toos loo arki karin. Si aad u aragto god madow waa inaad cabirtaa cufnaanta gobol cirka ah oo aad raadisaa gobollo leh tiro mug leh oo mugdi ah.
Waxaa jira godad badan oo madow oo ku jira nidaamyada xiddigaha laba-geesoodka ah. Waxay soo jiitaan tiro badan oo ka yimaada xiddigaha ku hareeraysan. Markay soo jiidato sifooyinkaas, cabirkiisu wuu kordhaa wuuna weynaadaa. Maalin maalmaha ka mid ah, xiddigga wehelka badani ka soo jeedo ayaa gebi ahaanba baaba'aya.
Sidaad aragtayba, waxyaabaha ugu badan ee lagu barto koonkan waa sida god madow u samaysmo. Waxaan rajeynayaa in macluumaadkan aad wax badan kaga baran karto sida god madow u sameysto iyo astaamaha uu yahay.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Astronomy » Sidee god madow u samaysmaa